Ambanin’Ampamarinana Manahy ny ho very tany ireo afindra monina
Atletisma-15 km de Tanà Hiverina indray 8 taona aty aoriana
8 taona indray atyaoriana, hoy ny filohan’ny seksion’ny taranja atletisma eto Antananarivo-Renivohitra Rtoa Nivo Rakotoson,
Jeunes Sport Events Hikarakara ny « IN­­-SOCCER Inter-Institut » andiany 1
Ho fitarihana ny tanora mpianatra hanao sy ho tia spaoro dia hikarakara ny hetsika baolina kitra « In-Soccer Inter- Institut » andiany voalohany ny fikambanana « Jeunes Sport Events »
Barea sy Sénégal sy ny fifanintsanana CAN 2019 Manana ny heviny ny mpitia baolina kitra Malagasy
Ho tanterahina any amin’ny kianja Lat Dior any Thiès Sénégal amin’ny sabotsy 23 martsa 2019 ho avy izao amin’ny 10 ora alina eto Madagasikara ny lalao
Kitram-pirahalahiana iraisam-pirenena Voatanan’ny Uscafoot Analamanga ady sahala ny Mahorais
Voatanan’ny ekipan’ny Uscafoot Analamanga ady sahala 1 - 1 ny ekipam-pirenena Mahorais tamin’ny lalaom-pirahalahiana iraisam-pirenena nifanaovan’izy ireo tetsy
Basikety Ligin’Analamanga Raikitra ny Fiadiana ny ho tompondaka rejionaly N1B L/V sy U20L
Ho tontosaina amin’ny sabotsy 23 sy alahady 24 martsa 2019 ho avy izao, eny amin’ny kianja Fifakri Ilafy sy eny amin’ny kianja Arocaria Ilafy samy eny Avaradrano, ny fifanintsanana basikety fiadiana ny ho tompondaka rejionalin’Analamanga sokajy N 1B lahy sy vavy ary U 20 lehilahy.
Fanoman-tena amin’ny Lalaon’ny nosy 2019 Hifandrina amin’ny Uscafoot Analamanga indray anio ny Mahorais
Ho fanomanana ny lalaon’ny nosy ho tanterahina any Maorisy amin’ny volana jolay ho avy izao dia mandalo eto amintsika ankehitriny ny ekipam-pirenen’ny baolina kitra any Mayotte.
Mampiahotra ireo mponina hiala eny amin’ny faritry ny loza, Ambanin’Ampamarinana ny fananan’izy ireo, indrindra ny tany.
«Atahoranay fa rehefa miala izahay ho lasan’ny olona ny taninay, indrindra ao anatin’iny faritra mena iny izay efa nalefa any amin’ny fokontany ny karne. Tokony halana ny vato dia miverina izahay. Fa raha alana izahay dia tsy tany hanorenana fa trano no ilainay. Raha ilaozana koa ny entana, manahirana, satria tamin’ny alatsinainy izao efa alina vao tonga ny mpitandro ny filaminana. Raha taomina anefa telo alina Ariary ny indray mitatitra, ary tery ny tranolay misy anay eto amin’ny INFP. Tsy fantatra koa hoe : “mandra-pahoviana izahay no eto amin’ny INFP, kianja mitafo ety Mahamasina ?”, hoy ny raim-pianakaviana iray, Jaona Fabien Andriandrafimparany, izay nilaza ho mpitondra tenin’ny madinika.
Nomen’ny fitondrana mahefa ny talata teo, hatramin’ny anio alakamisy ireo mponina mba hisintaka ny faritra mena. Marihina moa fa lazain’izy ireo ho tampoka izany ka nanatanteraka ny hetsika ho fanoherana izany ireo mponina, mbola nitohy omaly. Efa saika isan-taona amin’ny fahavaratra toy izao no nahitana fihotsahana, hoy izy ireo. Efa ela no nivory niangavy ny fitondrana hanala ny vato mandondona ny mponina sy ny zavamaniry saingy tsy nisy nandray ny hetahetanay, araka ny filazan’ny mponina sasany izay nivory teny Ambanin’Ampamarinana sy Ankadilalana, omaly tolakandro.